सन्दीप भन्छन्– "म जन्मेको कसैले थाहा पाएन, तर मरेको पुरै देशले थाहा पाउनुपर्छ" - Everest Talk
सन्दीप भन्छन्– “म जन्मेको कसैले थाहा पाएन, तर मरेको पुरै देशले थाहा पाउनुपर्छ”1 min read
सन्दीप यस्ता एक्ला कलाकार हुन, जो एक वर्षमा सातपटकसम्म अमेरिका पुगेका छन् ।
२०७६, २२ माघ बुधबार १८:०२
in एभरेष्ट टक विशेष, मनोरन्जन, मुख्य समाचार
मान्छे आफू आगो बन्न कोशिस गर्यो भने उसले आफूलाई खरानीमा मात्र सीमित नराखोस् । बरु कोइला बनोस् । खरानी त हावामा कतै उडेर जान्छ । तर कोइलाको ताप रहिरहन्छ ।
संसारमा कति मान्छे जन्मन्छन्, कति मर्छन् । यसको ठेक्का कुनै एक तथ्याङ्क विभागले लिए पनि उसको त्यो अनुमान मात्र हो । ठ्याक्कै यही हो भनेर उसले भन्न सक्दैन । चलायामान कुराहरूमा दाबी गर्न अलि गाह्रै पनि त छ !
इतिहास नै हेर्ने हो भने पनि यहाँ जो आगो बन्न सकेनन्, उनीहरू इतिहासमा जम्न सकेनन् । र बिलाएर गए । कोही खरानी भए, र हावामा कतै उडिगए । तर केही सीमित नाम भने कोइला भए, र निरन्तर ताप दिइरहे ।
यस्तै ताप दिइरहने नामहरूमध्येको एक नाम हो– कमेडियन सन्दीप क्षेत्री ।
सन् १९८६ मा बिरगञ्जमा जन्म लिएका सन्दीप अहिले बिरगञ्जको मात्र नभएर सारा देशकै सान बनेका छन् । उनलाई नचिन्ने यदि कोही छ भने ऊ सञ्चार माध्यमबाट धेरै नै टाढा छ ।
एक जमानामा रेडियोमा सुनेको आवाजलाई केही समयमै टेलिभिजनमा देख्न देख्न पाए नेपाली श्रोता तथा दर्शकले । यसले हँसाउँछ भनेर छाती चौडा बनाएर भन्न सक्ने उही सन्दीपको नाम अहिले देश तथा विदेशका कार्यक्रमहरू व्यस्त छ ।
हरेक मान्छेसँग हाँस्यरस हुन्छ । कसले त्यसलाई कुन स्तरमा प्रयोग गर्न जान्दछ भन्ने कुरामा मान्छेको सफलता मापन पनि सकिन्छ ।
सन्दीप आफ्नो अथिततर्फ फर्किएर सुनाउँछन्– म विद्यालय हुँदा सबैको नजरमा पर्ने विद्यार्थीचाहिँ थिएँ, तर यो केटा यहाँसम्म पुग्छ भन्नेचाहिँ कसैले पनि सोचेका थिएनन् । म जहाँ पुगेँ, त्यो आफ्नै मिहिनेतले पुगेको चाहिँ फेरि पक्का हो ।”
सन्दीपलाई आफैँप्रति विश्वास थियो । त्यही विश्वासले आज सन्दीपलाई देशकै दीप बनाइदियो ।
जीवनमा दुई ओटा दिन ज्यादै महत्वपूर्ण छन् । एक– आफू जन्मेको दिन, अर्को– म किन जन्मे ? भन्ने कुरा थाहा पाएको दिन ।
एकदिन आफैँतिर फर्किएर सन्दीपले भने– “म जन्मेको कसैले थाहा पाएन, तर म मरेकोचाहिँ सारा देशले थाहा पाउनुपर्छ । म मर्दा देशको झण्डा मेरो छातीमा होस् । बस्, अरू कुनै ठूलो सपना छैन मेरो । सम्पत्तिको नाममा यही एउटा सपना हो ।”
मान्छे भएर जन्मेपछि सँगै संर्घषको पनि जन्म भएको हुन्छ । संर्घर्ष भनेको सबै आर्थिकरूपको मात्र नभएर मानसिक वा अन्य कुनै पनि बन्नसक्छ ।
सन्दीपका बुवा प्याथोलेजिस्ट हुन् । सम्पन्न परिवारमा हुर्केका सन्दीपलाई संर्घषको दौरान कुनै आर्थिक चाप त परेन, तापनि सर्घंष भने भयानक नै गरेका थिए ।
आफूलाई मन परेका कामबाट बारबार असफलता हात लाग्दा पनि सन्दीपले “गलत बाटोमा पो छु कि ?” भन्ने कुरा कहिल्यै सोचेनन् । सोचे त केवल “म सही छु, मेरो बाटो सही छ । बस्, सफलता चाख्ने समय आएको छैन ।”
मान्छेले समयलाई पर्खन सकेन भने ऊ कतै पुग्दैन । वा भनौँ, मान्छे कतै हराउँछ ।
६० को दशकमा जम्मा १६ हजार बोकेर काठमाडौँ छिरेका सन्दीप अहिले करोडौँको मालिक भइसकेका छन् । कुनै समय कान्तिपुरले रिजेक्ट गरेका उनी अहिले कान्तिपुरकै सम्पत्ति हुन् ।
उनलाई आफूमा विश्वास थियो । कान्तिपुरले रिजेक्ट गर्दा पुनः स्टुडियो पुगेर, “म किन रिजेक्ट भएँ ? मलाई रिजेक्ट गर्नुको कारण के थियो ?,” भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने पहिलो व्यक्ति सायदै सन्दीप नै हुन् ।
बरु साथीहरू नै नबनाउनु, यदि बनाउनै छ भने जीवनका हारहरू उर्जा दिनसक्ने बनाउनु । सन्दीप आज जहाँ छन्, जुन उचाइमा छन्, त्यो सबै उनको साथीको देन हो भन्न उनी कुनै हिच्किचाहट राख्दैनन् । उनलाई साथीहरूले बनाए, र देशले सन्दीप पायो । त्यो सन्दीप जसको नाम लिएर देशले सधैँ गर्व गरेको छ ।
जिन्दगीको सबैभन्दा ठूलो साथीचाहिँ आफू नै रहेको जिकिर गर्छन् सन्दीप । आज आफ्नो विश्वास माथि भरोसा गरेर नै तीन वटा पासपोर्ट परिवर्तन गर्न सफल भएको कुरा सुनाउँदै गर्दा उनको अनुहारमा अव्यक्त खुसी प्रसारित भइरहेको छ । वा भनौँ, कार्यक्रमकै माध्यमबाट सन्दीपले ३० भन्दा बढी देशको भ्रमण गरिसकेका छन् ।
सबैले अमेरिकालाई सपनाको देश भनिरहँदा कलाकारकै रूपमा सन्दीप यस्ता एक्ला कलाकार हुन, जो एक वर्षमा सातपटकसम्म अमेरिका पुगेका छन् ।
उनले आफ्नो यात्रा रेडियोबाट सुरु गरेका थिए, अहिले संसारभर पुगेर दर्शकलाई लाइभ हँसाइरहेका छन् ।
बुवा प्याथोलोजिस्ट भए पनि जीवनमा बुवाको क्लिनिक कहिल्यै पुगेनन् । उनलाई क्लिनिकको रुवाबासीले तान्नै सकेन । उनी आफ्नै सुरका थिए, आफुसँग भएको कलालाई व्यावसाय बनाए तापनि उनले कलाकारितामा आफ्नो नाम स्वर्ण अक्षरले लेखाइसकेका छन् ।
तराईको सामान्य टेलिभिजनबाट आफ्नो टेलिभिजनको यात्रा सुरु गरेका सन्दीपलाई २५ सो पश्चात् कान्तिपुरले फोन गरेर बोलाएको थियो । त्योबेला सन्दीपले भने– “सर, म पनि आएको थिएँ कुनै बेला, त्योबेला म तपाइँकै र्शत अनुसार बस्न चाहान्थेँ । तर अहिले मलाई आफैँ बोलाउनुभएको छ, यसकारण म मेरो र्शतअनुसार मात्र आउनसक्छु ।”
सन्दीप क्षेत्री कलाकार मात्र पनि होइनन । उनी एक असल शिक्षक पनि हुन् । सिकाउन पाउनेहरू संसारकै भाग्यमानी हुन् । सिकाइमा उमेरको सीमाना हुँदैन । गोल्डेन गेट कलेजमा पढाएका सन्दीपले एमबीएस गरेका छन् ।
उनले ज्ुनै सोमा पनि “श्री त्रिजुद्ध महाविरप्रसाद रघुविर राम उच्च माध्यमिक विद्यालय” हँसाउन प्रयोग गर्न नाम वास्तवमै सन्दीपकै विद्यालय हो ।
रकेटको उदाहरण दिँदै सन्दीप भन्छन्– “हामी त्यो रकेट देख्छौँ नि ! ऊ जति माथि गयो त्यति नै आफ्नो हिस्सा छाड्दैछाड्दै झन् माथि झन् माथि जान्छ । यदि हामी मान्छे पनि हलुको भयौँ भने धेरै माथि पुग्छौँ ।”
आफूलाई हलुका बनाए मात्र माथि पुग्न सकिने सन्दीपको विश्वास छ । हरेक कुरालाई सकारात्मक तवरले हेर्न पनि सक्नुपर्छ भन्ने उनको मान्यता हो ।
सन्दीपमा जुत्ता मोह धेरै छ । नेपाल यातायातको यात्रामा जुत्ता कुल्चने प्रवृतिले सन्दीप हैरान थिए । तब एक प्रण गरे, र नेपाल यातायातसँग संवाद गर्दैै भने– “एकदिन बाटो यही हुनेछ, मान्छे यिनै हुनेछन्, र म पनि हुनेछु । तर म आफ्नै गाडीमा हुनेछु, तब यिनीहरूले मेरो जुत्ता कुल्चन पाउने छैनन् ।”
हो, आजकाल सन्दीप आफ्नै गाडीमा हिँड्छन् ।
सन्दीपलाई लाग्छ– “जन्मेपछि दुःख हुन्छ, ठीक छ । तर दुःख छ भन्दैमा म साइकलमा बसेर दुःख मनाउँदिन । दुखै मनाउनु छ त कारमै बसेर मनाउँछु ।”
हो, सन्दीप मिहेनतले मात्र होइन, सोचले पनि निकै अगाडि छन् ।
Tags: सन्दीप क्षेत्री
तराईतिर राष्ट्रियताको भावना कम छ: एन्फा अध्यक्ष
२०७७, १४ जेष्ठ बुधबार १२:४३
अस्पतालको आइसोलेसनमा एकको मृत्यु,कोरोना रिपोर्ट आउन बाँकी
२०७७, १४ जेष्ठ बुधबार १०:४२
गाउँपालिका अध्यक्षमा पनि कोरोना संक्रमण,सम्पर्कमा आएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह
२०७७, १३ जेष्ठ मंगलवार १६:०४
क्वारेन्टाइनमा खटिएका सैनिकमा पनि देखियो कोरोना संक्रमण
२०७७, १३ जेष्ठ मंगलवार १२:४१
आवश्यक सावधानी अपनाए कोरोनाको जोखिम असाध्यै कम गर्न सकिन्छ: जनस्वास्थ्य विज्ञ
२०७७, १२ जेष्ठ सोमबार १६:३८
विदेशबाट उद्दार गरिएका नागरिकलाई होटल क्वारेन्टाइनमा राख्न ३ देखि १६ हजारसम्म लाग्ने
२०७७, १२ जेष्ठ सोमबार १६:२८
नेपाली झण्डा फहराउन हिँडेका ७ जना लिपुलेकबाट पक्राउ
भारतीय मिडियाले उत्तेजित समाचार सम्प्रेषण गर्दा कुन नेपाली मिडियाले के लेखे ?
विश्वबजारमा चीनलाई उछिन्ने मौका खोज्दै भारत